“International” Engineering and training Center မှ နည်းပညာတက္ကသိုလ် (မကွေး) ရှိ နောက်ဆုံးနှစ်ကျောင်းသား ၊ ကျောင်းသူများအား Japan ဘာသာစကားပြော အခြေခံသင်တန်းပို့ချခြင်း – Technological University (Magway)
“International” Engineering and training Center မှ နည်းပညာတက္ကသိုလ် (မကွေး) ရှိ နောက်ဆုံးနှစ်ကျောင်းသား ၊ ကျောင်းသူများအား Japan ဘာသာစကားပြော အခြေခံသင်တန်းပို့ချခြင်း
“International” Engineering and training Center မှ နည်းပညာတက္ကသိုလ် (မကွေး) ရှိ နောက်ဆုံးနှစ်ကျောင်းသား ၊ ကျောင်းသူများအား Japan ဘာသာစကားပြော အခြေခံသင်တန်းကို (22.1.2020) ရက်နေ့မှစ၍ အပတ်စဉ် ဗုဒ္ဓဟူးနေ့ နေ့လည် (1:00) နာရီတွင် လာရောက်ပို့ချပေးမှာ ဖြစ်ပါသည်။ ၎င်းသင်တန်းကျောင်းမှ မန်နေဂျာ
ကိုမျိုးမြင့်ကျော်မှ TU (မကွေး) ရှိကျောင်းသား၊ ကျောင်းသူများ အားလုံးအတွက် အမှတ်တရ ဗလာ စာအုပ်များလာရောက် လက်ဆောင်ပေးသွားပါသဖြင့် မရသေးသည့် ကျောင်းသား၊ ကျောင်းသူများ IR/HR ဌာနတွင် လူကိုယ်တိုင် လာရောက်ထုတ်ယူနိုင်ပါသည်။
ဖေ‌ဖော်ဝါရီ 17, 2020 TU MG
Scholarship များအတွက် English4Skills Proficiency Test စစ်ဆေးခြင်း → ← ဌာနများ၏ လိုဂိုတံဆိပ်များ
Total Users : 18103
Total views : 70676
ရန်ကုန်-ပြည်-မန္တလေးအဝေးပြေးလမ်း -ကန်ပြား မကွေးမြို့
ဖုန်း-၀၆၃ ၂၀၂၈၃၀၉. ၀၉၅၃၄၂၈၆၁
Developed By Technological University (Magway)
Near Yangon-Pyay-Mandalay Highway Road Kanpyar, Magway Township, Magway Division, The Republic of the Union of Myanmar.
Tel: +95-063-28309, 95-9-5342861